दलान नेपाल : अर्को हप्ता भित्र मधेशी मोर्चा पनि सहमतीमा आउने छन - जीतेन्द्र देव
तर प्रमुख चार दल एक प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्षले हिजो पार्टीको बैठकमा सिमांकनमा कुरा नमिले संघियता विनाको संविद्यान जारी हुन सक्ने बताएका छन नि ?
- हेर्नुस, वाहिर कसले के भन्यो त्यसमा हामी टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर अहिले चार दल विच जसरी भए पनि संघियतालाई टुगियाएरै संविद्यान जारी गर्ने वारेमा छलफलहरु अगाडी वढेको छ ।
संघियतामा कुरा मिल्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
- संघियताको वारेमा म अहिले यती मात्रै भन्छू कि मधेशी मोर्चा सहित चार विच सहमतीको सम्भावना बन्दै गएको छ । मलाइ चाही अव बन्छ जस्तो लागीरहेको छ ।
कस्तो संघियताको मोडेलमा सहमती हुन्छ त ? किनकी मधेशले उत्तर दक्षिणको मोडेललाई स्विकार गर्दैन नि ?
- हेर्नुस, उत्तर दक्षिण त कुनै पनि हालतमा हुदैन । संख्याको रुपमा ८ गर्ने वारेमा पनि अब विवाद छैन । विवाद मुख्यतया पुर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई लिएर देखिएको छ । हामीले प्रष्ट रुपमा भनेका छौ कि पुर्वका झापा र पश्चिमको कन्चनपुरलाई उत्तर दीक्षणमा जोडदा हामीलाई कुनै आपति छैन । र वाकी कैलाली देखि मोरड सम्ममा हाम्रो अडान अनुसार दुई प्रदेश नै हो तर अन्तोगत्वा तीन ओटा सम्ममा हामी सहमत हुन सक्छौ ।
यो त तपाईको अध्यक्ष गच्छदारले ८ माघकै सेरोफोरमा गरेको प्रस्ताव तहो नि तर त्यसलाई त मधेशी मोर्चामा सामेल पार्टीहरुले स्विकार गर्लान र ?
- हो । यो फोरम लोकतान्त्रिकको प्रस्ताव भए पनि काग्रेस , एमाआवादी र एमाले पनि यसमा हामीले साकारात्मक पाएका छौ । जाहा सम्म मधेशी मोर्चाको प्रश्न छ, उहाहरुलाई हामीले अहिले अनौपचारिक कुराकानीमा के प्रस्ताव गरेका छौ भनेर संघियतामा आफनो दुई प्रदेशको वटम लाईन राख्दै नोट आप डिसेन्ट लखेर अघि वढनुस । पहिला त मिल्छ भन्ने दुई प्रदेहकै लागी छलफल गरौ भएन भने यो तीन प्रदेशको मोडलमा पनि आफनो असहमती राख्दै अघि वढनुस ।
किनकी अव संविद्याँन जारी गर्न ढिलो गर्नु हुन्न भन्ने कुरामा सबै एकमत छन । र अर्को कुरा के छ भन्ने मधेशी मोर्चाले आन्द्योलनकै भरमा सबै कुरा आई हाल्छ भन्ने सोच पनि राख्नु भएन । राजनितीक सन्तुलन कायम गर्न उहाशरु पनि अब अग्रसर हुनै पर्छ । आजको मितीमा के मधेश भडक्यो भने त्यसलाई महन्थ् ठाकुर र उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गर्न सक्नु हुन्छ ? सवाल यो पनि छ । त्यसैले मलाई विश्वास छ उहाहरु पनि राजनितीक सन्तुलन कायम गर्दै अगाडी वढनु हुन्छ ।
त्यसो भयो कहिले सम्म सहमती बन्नाला जस्तो तपाईलाई लाग्छ ?
- मधेशी मोर्चा संग अर्को हप्ता भित्र सहमती बन्ने कुरामा म विश्वस्त छू ।